မင်းသားအင်ဒရူး၏ဗျာဒိတ်ကျမ်း: ဘယ်လို Duke ကြောက်မက်ဘွယ်သောနှင့်ကြောက်စရာယခုအချိန်တွင် & # 039 ဘယ်တော့မှမေ့လိမ့်မည် - Tele RELAY တစ်ခု
မူလစာမျက်နှာ » လူတွေ & ပုံစံမျိုးမှာနေထိုင် မင်းသားအင်ဒရူး၏ "ဗြာ: Duke ကြောက်မက်ဘွယ်သောနှင့်ကြောက်စရာယခုအချိန်တွင် & # 039 ဘယ်တော့မှမေ့လိမ့်မယ်ဘယ်လို;
မင်းသားအင်ဒရူး ယင်း၏နွေရာသီအနားယူပုတိုစေ ချစ်သောပိုင်ဆိုင်မှု Balmoral, ဘုရင်မကြီး ယခုအပတ် - အပြီးတွင်ရုံရက်ပေါင်း စာရာသည်ဖာဂူဆန် ဒါ့အပြင်အစောပိုင်းမှာစီစဉ်ထားထက်ထားခဲ့တယ်။ နယူးယောက်၏ Duchess - ခစျြစနိုးဖာဂီအဖြစ်လူသိများ - အခါတိုင်းပြည်ကျန်ကြွင်းစေပြီ မင်းသားဖိလိပ္ပု အရှင် Edinburgh ၏ Duke နှင့်အတူအဆင်မပြေတှေ့ဆုံရှောင်ရှား, ဖြစ်ပျက်ကြလိမ့်မယ်။ နယူးယောက်၏ Duke မကြာသေးမီက Duke နေဆဲသူတို့ရဲ့  ကွာရှင်းခဲ့ပေမဲ့အသက်ရှင်တော်မူသည်ဘယ်သူကိုနဲ့သူ့ရဲ့ဇနီးဟောင်းစာရာအတူတော်ဝင်အချစ်ဇာတ်လမ်း knotweed ၏ကောလာဟလများနှင့်အတူဂုဏ်ပြုခဲ့ပါတယ် 1996 .
သို့သော်ကြောင်းကို 1985 အစည်းအဝေးကနေအန္ဒြေနှင့်ဖာဂီရှေ့၌ il သူအဖွစျဖျောပွသောအရာကိုကြံ့ကြံ့ခံ သူ၏ "scariest အခိုက် "။
"အင်ဒရူး: အဆိုပါ Playboy မင်းသား" သူ၏စာအုပ် 1983 အတွက်အင်ဒရူး Morton Biographer စာအုပ် 1982 အတွက်ဖေါ့က်လဲန်းဒပဋိပက္ခကာလအတွင်းရဟတ်ယာဉ်ယာဉ်မှူးအဖြစ်မင်းသား၏အခန်းကဏ္ဍကိုသို့ delves ။
အဆိုပါ 25 မေလ, အာဂျင်တီးနားတပ်ဖွဲ့များမင်းသားဘုတ်အဖွဲ့အပေါ်ဖြစ်ခဲ့သည်ဟူမူကား, သင်္ဘောရဲ့မင်းသားအင်ဒရူးသည် HMS ဘယျသူမှမအောငျတခုတခုအပေါ်မှာတိုက်ခိုက်မှုစတင်ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။
အဆိုပါအာဂျင်တီးနား Exocet ဒုံးကျည်အောင်မြင်စွာဘယျသူမှမအောငျ၏လမ်းကြောင်းကနေလမ်းကြောင်းပြောင်း, 12 သေဆုံးမှုအောင်, ဗြိတိန်လေယာဉ်တင်သင်္ဘောအတ္တလန္တိတ်ပေါ်ကိုနှိပ်ပါ။
နယူးယောက်၏ Duke (ရုပ်ပုံ: Getty)
မင်းသားအင်ဒရူးတော်ဝင်ရေတပ်အတွက်ရဟတ်ယာဉ်မောင်းခဲ့ (ရုပ်ပုံ: Getty)
Morton ကရေးသားခဲ့သည်: "အဆိုပါကုမ္ပဏီကြီးအတ္တလန္တိတ်ပေါ်ကိုအဆိုပါ Exocet ကိုက်ခဲ့သည်။
"လူအပေါင်းတို့သည်အဖြစ်ဆိုးသည်, သူသည်လေထဲတွင်ခဲ့ပေမယ့်အသက်တာ၏ကြောက်မက်ဘွယ်သောဆုံးရှုံးမှုကိုကာကွယ်ပေးနိုင်၏လုံးဝမမှီ ။ "
ဆက်ဖတ်ရန်: တော်ဝင် Fief အင်ဒရူး Eugenie နှင့် Beatrice အကြောင်းကိုအလေးအနက်စိုးရိမ်ပူပန်ကြောက်ရွံ့ရိုသေ
ဘုရင်မကြီးအဲလစ်ဇဘက် II ကဖေါ့က်လဲန်းဒပဋိပက္ခအပြီးအင်ဒရူးကြိုဆို (ရုပ်ပုံ: Getty)
"ကျနော်တို့ကထူးဆန်းတဲ့ခွံကိုအနီးကပ်လာ get ကိုမြင်လျှင်နှင့်ဘယျသူမှမအောငျက၎င်း၏ဒုံးကျည်များ shoot ကိုမြင်တော်မူ၏။
အဆိုပါမင်းသမီး Beatrice Eugenie အားပေးပြီးမှဂုဏ်အသရေဆုံးရှုံးခံရမလား?
ဘယ်လိုမင်းသားအင်ဒရူးက "ကိုထိခိုက်စေတော်မမူကြောင်း mom, Boy မိဖုရား" ဖြစ်ပါတယ်
တိုက်ခိုက်မှုမပြုမီဖော့အတွက်မှတ်တမ်းတင်ဓါတ်ပုံများရိုက်ကူးအတ္တလန္တိတ်ပေါ်ကို (ရုပ်ပုံ: Getty)
အတ္တလန္တိတ်ပေါ်ကိုတစ်အသက်ရှင်ကျန်ရစ်သူနေအိမ်ပြန်လည်ရောက်ရှိ (ရုပ်ပုံ: Getty)
"ဒါဟာဖြစ်နိုင်ခဲ့ငါ့အ scariest Morton ဆက်လက်:" ဒါပေမယ့်ဘာပဲသူ၏ကိုယ်ပိုင်အတွေးများကို ကြောက်မက်ဘွယ်သောတိုက်ခိုက်မှု၎င်း၏ပင်လယ်ဘုရင်က scouring ခံခဲ့ရပြီးနောက်သူနေဆဲလုပ်ဖို့အလုပ်နှင့်မိနစ်အနည်းငယ်ရှိခဲ့ . ဒုက္ခဆင်းရဲအတွက်အသက်ရှင်ကျန်ရစ်သူအတ္တလန္တိတ်လေယာဉ်တင်သင်္ဘောများအတွက်အေးစက်နေတဲ့ပင်လယ်အလယ်။ "
စာရေးသူလည်းဗြိတိသျှဖျက်သင်္ဘော HMS ရှက်ဖီးသုံးပတ်အတ္တလန္တိတ်ပေါ်ကို၏ကြီးကျယ်တိုက်ခိုက်မီ Exocet ဒုံးကျည်ထိမှန်သောအခါမင်းသားသည်လေထုထဲတွင်ဖမ်းမိခဲ့ပုံကိုဖော်ပြသည်။  အဆိုပါ HMS ရှက်ဖီး "t itle =" HMS ရှက်ဖီး "ဒေတာ-w =" 590 "ဒေတာ-ဇ =" 350 ">
တောင်အတ္တလန္တိတ်အတွက်လောင်းမတိုင်မီမှတ်တမ်းတင်ဓါတ်ပုံများရိုက်ကူးဖျက်ဆီးခံရအဆိုပါ HMS ရှက်ဖီး, (ရုပ်ပုံ: Getty)
သူ wrote: "ဟုအဆိုပါလေကြောင်းလိုင်းကာကွယ်ဘို့တာဝန်ရှိဗြိတိသျှဖျက်သင်္ဘော HMS ရှက်ဖီး, မရှုံးနိုင်သော နှင့် Hermes, ဆက်လက်ရှင်သန်ရန်မအခွင့်အလမ်းရှိခဲ့ပါတယ်။
"ဒီသင်္ဘောသား Exocet အချိန်လေးအတွင်းမှာတစ်ဦးကိုမှန်ကန်အဖြူငရဲသို့သင်္ဘောလှည့်သင်္ဘောများ၏နှလုံးထဲသို့ထိုးကျရှေ့တော်၌ထိုဒုံးကျည်တိုက်ခိုက်မှုမှကာကွယ်ရန်သာ 20 စက္ကန့်ခဲ့သည်။
"မင်းသားအင်ဒရူးမီးတောက်ထဲမှာအနက်ရောင်မီးခိုးမြင့်တက်တဖြည်းဖြည်းရှက်ဖီး၏အထူမိုဃ်းတိမ်ကဲ့သို့ထိတ်လန့်အတွက်စောင့်ကြည့်ခြင်း, တိုက်ခိုက်သည့်အချိန်တွင်ချွတ်။ "
ပို့စ်မောက်အတွက်နာမည်ကြီးမင်းသားအင်ဒရူးရဲ့ပြန်လာ HMS ဘယျသူမှမအောငျ (ရုပ်ပုံ: Getty)